Ndekupi kwaungawana backlink kubva kune infographics?
Mazuva ano, infographics inoramba ichiwedzera pakuwedzerwa. Kutaura zvazviri, mifananidzo iyi inobata ziso inotakura ruzivo runofanirwa inofungidzirwa kuva makumi matatu kazhinji inowanikwa "yekuchekwa" neaverengi, panzvimbo yezuva nezuva mabhuku akajeka. Ndicho chikonzero mubvunzo - kupi kuti uwane backlinks kubva ku infographics - unonzwisisa zvakakwana. Hungu, ichokwadi, infographics inogona kuunza zvikomborero zvikuru kune bhizinesi rebhizimusi. Zvose zvaunoda kutarisa zvinonyanya kujeka ndezvokuita kuwirirana kwakakodzera kwemashoko anokosha uye zvinyorwa zvinoratidzwa - zvose zviri kuoneka zvakajeka, uye kubudisa mashoko anofadza uye anofadza pamusoro penyaya yakarurama kune vateereri vakarurama. Chii chinowedzera - kuva nerugare rwezvakanaka uye kumanikidzira infographics kunoita kuti zvinyorwa zvako zvigamuchirwe kuti zvive nehutachiona. Nenzira iyo, yakanaka infographics ine maitiro akanaka kwazvo emuHQ backlink-inoita simba, panguva imwechete kuvandudza webhusaiti yako 'kana kuti blog inofambira mberi mune SEO panguva yakareba. Saka, kupi kuwanika backlink kubva ku infographics? Ndisati ndakuudza rondedzero yezvinyorwa zvayo, ngatitange nezvimwe tsanangudzo dzinokosha. Chii chinonzi infographics yakanaka? Heano zvinhu zvitatu zvinonyanya kuita zvinhu zvose zvakanaka - kushamisa kunoshamisa, kukurudzira uye kufambira mberi, uye nhamba dzekutsvakurudza zvakanaka.
Izvo zvakagadziriswa zviri pachena chinhu chekutanga chinodiwa negaini yega yega kuti inotanga kushanda. Zvose zvaunoda kuti uende nehutachiwana ne infographics zviri kuvaita zviso-zvinonakidza uye zvakagunzwa neunyanzvi hwokugadzira.
Kukurudzira uye kufambisa kune zvakakosha kune infographics sekugadzirwa kwakashamisa uye kukosha kwadzo kwakapiwa netsamba dzakaongororwa zvakanaka. Zvichipa kuti infographic haina kukurudzirwa nenzira yakarurama (i. e. , nehuwandu hwekufambiswa kwemashoko uye nemuenzaniso kuburikidza ne-email), zvoga zvese zvichange zvisingabatsiri, zvechokwadi.
Tsvakurudzo dzakanyatsotsvakurudzwa zvinoreva kuti zvose zvakanaka zvinyorwa zvinofanira kuendesa zvimwe zvinhu zvinokosha, zvakadai sezviitiko zvinonakidza, zvisinganzwisisiki pane imwe nhaurwa, ruzivo rwakanaka rwekuonekwa, kana chero zvakadai sekunyatsoparadzira mahwendefa kana mifananidzo.
Uye pano ndiko kwaunogona kuwana backlinks kubva ku infographics - pasi apa pane urongwa hwezvinhu zvina zvakakurudzirwa mumakambani eInternet kuti akubatsire pakusarudza yako yekutanga:
Piktochart iri nyore -to-shandisa chigadzirwa chekuita HQ infographics yepamusoro-soro backlinks. Ita yako yega yega infographic iende nehutachiona nyore nyore. Zvose zvaunoda ndeyekutsvaga nguva yekuumba iyo inokonzera infographic inogona kuti "welcome" kugoverana. Urongwa hwekusununguka paPiktochart hunopa pfupi pfupi yekugadzirisa kugadzirisa zvirongwa, ndicho chikonzero kana uchida uye wakagadzirira kushanda zvakawanda pahuwandu hwepographics - iwe zviri nani kufunga kubhadhara kubhadharwa kubhadhara kunze uko.
Canva imwezve tsime rakanaka rinogona kukubatsira kushandisa pasina infographic design templates. Uye ivo vakakura! Batsirwa kubva pane zvakanyatsogadziriswa infographics kuti uwane zvakanyanya kumashure, zvinotungamirira, zvikamu, uye zvinotevera.
Venngage Infographics ndiyo inoshandisa infographic maker yaunogona kufungidzira. Iva nehutano hwakasarudzwa kusarudza mumwe pakati pezana mazana mashanu maitiro ekugadzirisa zvirongwa zvekugadzirisa - kungoita pane dzimwe nguva.
Fiverr ndiyo yekupedzisira yakasarudzwa yevaya vanotarisa kupi kuti vawane backlinks kubva ku infographics. Fiverr ichava yako yakanakisisa sarudzo, kana iwe uchida kuwana infographic yako yakabuda kunze - kubva pa 5 bucks yepamusoro-infographic yakagadzirwa zvikuru iwe webhusaiti yako kana blog Source .